सरकारी लाभ पाउन आफ्नै बहिनीसँग विवाह ! « रिपोर्टर्स नेपाल
सरकारी लाभ पाउन आफ्नै बहिनीसँग विवाह !
प्रकाशित मिति : १६ पुष २०७८, शुक्रबार
एजेन्सी, १६ पुस। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित फिरोजबादका एक व्यक्तिले आफ्नै बहिनीसँग विवाह गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम’बाट पैसासहित अन्य सुविधा पाउन उक्त व्यक्तिले बहिनीसँग विवाह गरेको खुलासा भएको हाे ।
सामाजिक कल्याण विभागअन्तर्गत सामूहिक विवाह गर्ने हरेक जोडीलाई राज्य सरकारले ३५ हजार रकम र घरपरिवारका अन्य उपहार प्रदान गर्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले २० हजार भारु बेहुलाको बैंक अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ र १० हजार भारुबराबरको उपहार दिइन्छ । उक्त विवाह ११ डिसेम्बरमा फिरोजबादको टुंड्ला गाउँमा भएको थियो । केही दिनपछि गाउँलेले विवाह गर्ने जोडी सहोदर दाजु र बहिनी भएको पत्ता लगाएका थिए ।
एउटा सरकारी कार्यलयको परिसरमा आयोजना गरिएको सो विवाहमा ५१ जोडी बन्धनमा बाँधिएका थिए । गैरकानुनी ढंगले अनुचित लाभ लिने उदेश्यले विवाह गर्ने जोडीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यसैबीच बेहुला बन्ने व्यक्तिको आधार कार्डबारे छानविन सुरु भएको छ । उक्त योजनाको लाभ पाउन सन् २०१८ मा १२ वटा जोडिले विवाह गरि योजना रकम लिएका थिए ।-Photo: Agency
‘ब्लाइन्ड डेट’ मा गएकी महिला लकडाउनका कारण पुरुषको घरमै अड्किइन्
एजेन्सी, पुस २९ । चीनमा ब्लाइन्ड डेटमा गएकी एक महिला आकस्मिक रूपमा लगाइएको कोभिड लकडाउनका
सुँगुरको मुटु पुरुषमा सफल प्रत्यारोपण
एजेन्सी, २७ पुस। अमेरिकाका एक व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ । बीबीसीका अनुसार सुँगुरको
‘गेटवे टु हेल’ अर्थात् नर्कको ढोका’ बन्द गर्ने योजनामा तुर्कमेनिस्तान
एजेन्सी, २५ पुस। तुर्कमेनिस्तानमा ‘नर्कको द्वार’ भनेर चिनिने ठाउँलाई त्यहाँको सरकारले बन्द गर्न आदेश दिएको
मृत घोषित गरिएको शिशु दाह संस्कार गर्ने कर्ममा रोएपछि…
चिकित्सकले मृत घोषित गरेका एक शिशु दाह संस्कारको तयारीका क्रममा रोएपछि टर्कीका एक दम्पत्ति चकित
‘एरेन्ज म्यारिजबाट बचाऊ’ भन्दै आफ्नै विज्ञापन गरेर प्रेमिकाको खोजी गरेपछि…
एजेन्सी, २३ पुस। बेलायतको बर्मिंघमका मुख्य सडकमा ‘सेभ मि फ्रम एरेन्जड म्यारिज’ लेखिएको होर्डिङ बोर्डको
विमानको शौचालयभित्र नवजात शिशु फेला परेपछि…
एजेन्सी, पुस २० । एयर मरिशशका कर्मचारीले आफ्नो विमानको शौचालयमा फोहोर फाल्ने भाँडोमा एउटा नवजात
३ माघ: चीनको जन्मदर गतवर्ष न्यूनमा झरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ । विश्लेषकहरूले अपेक्षा
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चालिँदै, स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा फिल्डमा निस्किए
काठमाडौं, ३ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणको लागि एक मात्र
प्रदेश २ को प्रदेश सभा बैठक सुरु
काठमाडौँ, ३ माघ। प्रदेश २ को प्रदेश सभा बैठक शुरु भएको छ । बिहान ११